SAWIRRO: Soomaaliya oo bilowday bixinta rukhsadaha shirkadaha diyaaradaha rayidka – Calanka.com
SAWIRRO: Soomaaliya oo bilowday bixinta rukhsadaha shirkadaha diyaaradaha rayidka
in Dibedda — by admin —	February 12, 2021
Markii ugu horreysay muddo 30 sano ah, Soomaaliya ayaa billowday diiwaan galinta diyaaradaha iyo bixinta shatiga duuliyeyaasha iyo farsamo yaqaannada diyaaradaha.
Munaasabad maanta ka dhacday magaalada Muqdisho ayuu Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada dowladda Federaalka Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Salaad, ku daah furay adeegga diiwaan-gelinta Diyaaradaha Iyo Ruqsad-siinta Xirfadleyaasha.
Wasaaradda ayey dadaal dheer kaddib u suurtagashay in ay soo saarto lambarka aqoonsiga oo la siiyay diyaaraddii koowaad tan iyo burburkii Soomaaliya.
Sidoo kale waxaa aqoonsiga sharciyeed la siiyay dhowr duuliye iyo qaar ka mid ah injineerrada ka howl galaya farsamada diyaaradaha.
Axmed Macallin Xasan, oo ah agaasimaha hay’adda duulista hawada ee Soomaaliya, ayaa BBC-da uga warramay waxa ay ka dhigan tahay in dalka uu markii ugu horreysay awood u yeesho diiwaan galinta diyaaradaha iyo xirfadleyaasha.
Wuxuu sheegay in howshan ay tahay mid aad muhiim u ah muddo dheer iyo dadaal badanna soo qaadatay.
“Markii aan maamulka hawada Qaramada Midoobay kalasoo wareegnay 18-6-2018, Soomaaliya waxay ku khasbanaatay in ay dib u howl-galiso qeybihii dajinta shuruucda iyo ilaalinta bad-qabka diyaaradaha. Marka qeybtan ayey dowladda Soomaaliya shuruucdeeda dhameystirtay, taas awgeedna waxaan awood u yeelannay in aan diiwaan galinno ama taargo siinno diyaaradaha,” ayuu yidhi agaasimaha.
Wuxuu intaas ku daray in markii ugu horreysay abid shati la siiyay diyaarad uu si gaar ah u leeyahay qof shakhsi ah oo Soomaali ah.
“Muddo sanad iyo bar ah ayey howshan nagu qaadatay in aan dajinno. Xilligii ay jirtay dowladdii Dhexe ee Soomaaliya waxaa taargo la siin jiray oo kaliya diyaaraddii qaranka ee Somali Airlines, iyada kaliya ayaa Soomaaliya ka jirtay, laakiin hadda waxay jamhuuriyadda Soomaaliya intii ay jirtay shatigii ugu horreeyay guddoonsiisay qof Soomaali ah oo diyaara leh.”
Arrintan ayaa faa’iido gaar ah u leh ganacsatada Soomaalida ah ee soo iibsada diyaaradaha rayidka qaada, sida uu sheegay agaasimaha hayadda duulista hawada.
“Waxaa jiray diyaarado ay muwaadiniin Soomaali ah leeyihiin oo waddamada dariska aha iyo dalal kaleba ka watay taargo – oo dhib ku qabay – marka taas ayaa hadda meesha ka baxday. Muwaadinka Soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay kaliya in uu diyaarad soo gato, islamarkiina uu Soomaaliya keensado, kaddibna waxaa la marsiinayaa nidaamka saxda ah, sharci ahaan marka lagu qancana hayaddu waxay siin doontaa taargo ay diyaraddiisa duullimaadyo uga sameyn karto gudaha Soomaaliya iyo caalamkaba,” ayuu yidhi Axmed Macallin Xasan.
Dowladda Soomaaliya ayaa wixii ka dambeeyay 2017-kii gacanta ku heysay maamulka dhaqaalaha kasoo xarooda dhinaca hawada, kaas oo tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee 1991-kii ay hayeen hayado ka tirsan aramada Midoobay.